I-DAM1-125 Series Umsebenzi oBanzi oSebenzayo weSixhobo seSekethe esiBumbayo (Uhlobo oluLungisiweyo)
Izahluli zesekethe ze-DAM1 zenzelwe ukuqhuba okwangoku kwimo yesiqhelo kunye nokuyicima kwiisekethi ezimfutshane, ukulayisha ngaphezulu, ukubamba okungamkelekanga kunye nokusebenza kokuqhuqha kunye nokukhubeka kwamalungu esekethe yombane. Ziyilelwe ukusetyenziswa kwiiyunithi zombane ezinamandla ombane asebenzayo anqunyelwe kwi-400V ngokokulinganisela okwangoku ukusuka kwi-12,5 ukuya kwi-1600A.
Ziyangqinelana neemfuno ze-EN 60947-1, EN 60947-2
I-DAM1-160 MCCB Icandelo leSekethe eliBunjiweyo
I-DAM1-250 MCCB Icandelo leMeko eliBunjiweyo leSekethe
Ziyangqinelana neemfuno ze-EN 60947-1, EN 60947-2.
I-DAM1 630 yeeMeko eziBunjiweyo zeSekethe yeSekethe
I-DAM1 800 MCCB yeMeko yoBumbano yeSekethe
I-DAM1 Series Uhlobo lwe-Elektroniki yoBumba beSekethe (MCCB)
Abaqhubi beesekethe nge-Elektroniki ngaphezulu kokuKhutshwa ngoku:
Inqaku lokucalucalulo lweesekethe ezibalekayo ezivela kwi-thermal-magnetic breakers kukulawula ukukhutshwa okungaphezulu okwangoku okwenziwa ngombane yisekethe. Ukulawulwa kwe-elektroniki kwenziwa nge-microprocessor. Ngexesha loyilo lwesekethe ye-elektroniki, awona mathuba mabi okuhlangana nawo ekusebenzeni athathelwe ingqalelo. Kwimijikelezo yesekethe ephezulu, ukuvulwa ngokuthe ngqo kuye kwaqinisekiswa ngaphandle kokusebenza kwesekethe ye-elektroniki. Ngale ndlela, ukubanakho ukusilela kwisekethe ye-elektroniki kuyekisiwe. Ubuninzi, ubuncinci, umndilili, njl. Amaxabiso ezinto ezitsaliweyo ngoku ngamaxesha ahlukeneyo (ebusuku-emini) zinokuthathwa .Ikaliwe kwaye kwangoko kuvulwa iindawo zohlengahlengiso lweesekethe ezibanzi. Eli nqaku livumela ithuba lokusetyenziswa ngokubanzi kwikhefu Ngaphezu koko, ikhefu lesekethe elektroniki alichaphazeleki kumaqondo obushushu aselugcinweni.
I-DAM1 Series yeThermal kunye neMagnetic Adjustable Type Molded Case Circuit Breaker (MCCB)
Uluhlu lwe-DAM1 yeThermal kunye nemagneti ehlengahlengisiweyo yoHlahlo lweeSekethe eziCwangcisiweyo zenzelwe kwaye zenziwe zanikwa imigangatho yodidi lwehlabathi. isicelo.
I-DAM1 1600 yohlobo lwe-elektroniki olwenziweyo kwimeko yesekethe (MCCB)
Abaphuli beesekethe nge-Elektroniki ngaphezulu kokuKhutshwa kwaNgoku
I-DAM1 125 Uthotho lwe-MCCB ABB ISOMAX
Izinto eziluncedo • Ukufakwa okulula okuzimeleyo kwezixhobo ezincedisayo: Ukuqhagamshela iAlarm; Umfowunelwa ongumncedisi; Phantsi kokukhutshwa kwamandla ombane; Ukukhululwa ngokukhawuleza; Indlela yokusebenza yokubamba; Indlela yokusebenza yombane; Isixhobo se-plug-in; Zoba isixhobo ;. • Iseti esemgangathweni yekhefu nganye yesekethe ibandakanya iibhasi zebhasi okanye ii-lugs zekhebula, isahluli sesigaba, iseti yezikrufu kunye namandongomane okufakwa kwiphaneli yokufaka. • Ngoncedo lwesibambiso esikhethekileyo iiyunithi ezili-125 nezili-160 zingafakelwa kuloliwe we-DIN.
I-DAM1 160 Uthotho lwe-MCCB ABB ISOMAX1
Izinto eziluncedo • Ukufakwa okulula okuzimeleyo kwezixhobo ezincedisayo: Ukuqhagamshela iAlarm; Umfowunelwa ongumncedisi; Phantsi kokukhutshwa kwamandla ombane; Ukukhululwa ngokukhawuleza; Indlela yokusebenza yokubamba; Indlela yokusebenza yombane; Isixhobo se-plug-in; Zoba isixhobo ;. • Iseti esemgangathweni yesaphuli yesekethe nganye ineebhasi zebhasi okanye ii-lugs zekhebula, izihluli zesigaba, iseti yezikrufu kunye neenathi zephaneli yokufaka ye-ontan. • Ngoncedo lwesibambiso esikhethekileyo iiyunithi ezingama-125 nezili-160 zingafakwa kwi-DIN-kaloliwe. • Ubunzima kunye d ...
Uluhlu lwe-DAM1-250 MCCB ABB ISOMAX S3
Izinto eziluncedo • Ukufakwa okulula okuzimeleyo kwezixhobo ezincedisayo: Ukuqhagamshela iAlarm; Umfowunelwa ongumncedisi; Phantsi kokukhutshwa kwamandla ombane; Ukukhululwa ngokukhawuleza; Indlela yokusebenza yokubamba; Indlela yokusebenza yombane; Isixhobo se-plug-in; Zoba isixhobo ;. • Iseti esemgangathweni yesaphuli yesekethe nganye ineebhasi zebhasi okanye ii-lugs zekhebula, izihluli zesigaba, iseti yezikrufu kunye neenathi zephaneli yokufaka ye-ontan. • Ngoncedo lwesibambiso esikhethekileyo iiyunithi ezingama-125 nezili-160 zingafakwa kwi-DIN-kaloliwe. • Ubunzima kwi ...
I-DAM1 400 MCCB ABB ISOMAX
Izinto eziluncedo • Ukufakwa okulula okuzimeleyo kwezixhobo ezincedisayo: • Ukudibana kweAlarm; • Umfowunelwa oncedisayo; Phantsi kokukhutshwa kwamandla ombane; • Ukukhululwa ngokukhawuleza; • Ukuphathwa kwendlela yokusebenza; Inkqubo yokusebenza kombane; • Isixhobo se-plug-in; Isixhobo sokuzoba ;. • Iseti esemgangathweni yekhefu nganye yesekethe ibandakanya iibhasi zebhasi okanye ii-lugs zekhebula, isahluli sesigaba, iseti yezikrufu kunye namandongomane okunyusa ipaneli. Ngoncedo lwesibambiso esikhethekileyo iiyunithi ezingama-125 nezili-160 zingafakwa kwi-on • Wei ...